အပိုငျး ၂၅ - BookCubicle
Author : KaungWaiYan
Genres : Adventure, Action
Original Author : Xin Xing Xiao Yao (心星逍遥)
နာကငျြမှုကိုအံကွိတျခံရငျး ဂငျြခနျြကိုခွထေောကျဖွငျ့လှမျးကနျလိုကျကာ သူ့ကနျြလကျတဈဖကျကိုရုနျးထှကျလိုကျသညျ။ သူ့လကျတဈဖကျကကြိုးသှားပွီဖွဈပမေယျ့ ကနျြတဈဖကျကတော့ အခွအေနမေဆိုးလှသေး….
သူကား လကျတဈဖကျကြိုးနတောတောငျမှ ပွနျလညျတိုကျခိုကျနိုငျသေးသညျ။ အခုအခွအေနကေဆိုးရှားနပေမေယျ့ ကံကောငျးတာက ကဒီယနျမှာအတှအေ့ကွုံတှမြေားသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အခွအေနကေို မညျသို့ထိနျးခြုပျသငျ့သညျကို သူသိသညျ။
အရှိနျပွငျးသညျ့ခွကေနျခကျြနှငျ့ လှုပျရှုားလာသညျ့လကျကို ဂငျြခနျြ့မကျြလုံးထဲမွငျလိုကျသညျမို့ သူတိုကျရိုကျပွနျမတိုကျနိုငျသညျကိုသိလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မတတျသာစှာဖွငျ့ ကဒီယနျ့လကျကိုလှတျပေးလိုကျပွီး Profound ခွလှေမျးကိုသုံးကာ ရှေုာငျထှကျလိုကျသညျ။ ကဒီယနျ့ကနျခကျြတှမှေလှတျရနျ ကိုယျကိုတဈပတျလညျကာ ဆုတျရငျးရှေုာငျတိမျးသညျ။ တဈပွိုငျနကျတညျးမှာပဲ သူ့သူတျောစငျစှမျးအားတှကေိုစုကာ ကဒီယနျ့ကြောကိုရိုကျခရြနျခြိနျထားလိုကျသညျ။
ဂငျြခနျြဘေးကိုရှေုာငျထှကျသှားတာနဲ့ ကဒီယနျ့သတိထားနနေရေကား သူ့ကြောမှစှမျးအားကိုခံစားမိသညျနှငျ့ အနညျးငယျတောငျတုံ့ဆိုငျးမနဘေဲ ခကျြခငျြးရှေုာငျတိမျးလိုကျသညျ။ သူရှေုာငျလိုကျပမေယျ့ ထိတျလနျ့စိတျကရှိနဆေဲ။ သူ့ကြောမှဖိအားကအလှတျပေးခွငျးမရှိ၇ာ ကဒီယနျ့စိုးရိမျသှားရသညျ။
ကဒီယနျ့အတှကျ ဂငျြခနျြ့ရဲ့လကျနှဈဖကျအပွညျ့စှမျးအားတှကေိုရှေုာငျဖို့ရာ မလငျြလိုကျနိုငျလဘေူး။ ထို့ကွောငျ့ သူ့ကြောကိုရိုကျခမြိရာက အသံအကယျြကွီးထှကျလာလတေယျ။ ဤသညျက ကဒီယနျ့ကိုရှေု့သို့နှဈလှမျးလောကျ အရှိနျဖွငျ့ရောကျသှားစတေယျ။ သူကား သနျမာသညျ့သူတျောစငျဖွဈရကား ခကျြခငျြးသူ့ကိုယျသူစဈဆေးလိုကျတယျ။ သူ့မကျြနှာကဖွူဖြော့နခေဲ့ပွီးဖွဈသလို ဂငျြခနျြကနဂိုကထိခိုကျထားသညျ့နရောကိုသာ ထပျရိုကျတာဖွဈတဲ့အပွငျ ဂငျြခနျြ့စှမျးအားက သူတျောစငျအဆငျ့ကိုးအထှတျအထိပျအနအေထားမှာလညျးရှိနသေေးတယျ။ သူကသူတျောစငျတဈယောကျဖွဈနပေမေယျ့ စှမျးအားလညျးပိုမွငျ့ပမေယျ့ သူကား ဒဏျရာရထားပွီးသားဖွဈတော့ သူပွငျးပွငျးထနျထနျထပျမံထိခိုကျသှားရပွနျတယျ။ ကဒီယနျ့သူ့ကိုယျတှငျးခြီတှကေို ခန်ဓာကိုယျကိုလှညျ့လညျကာ ကုသလိုကျသညျ။ သူ့ခန်ဓာအစိတျအပိုငျးကလီစာတှမှော သလေုအောငျနာကငျြနပွေီဖွဈသညျ။
ကဒီယနျသူ့ကိုယျသူစစိဆေးနဆေဲမှာ ဂငျြခနျြဟာသူ့ဘေးကိုရောကျလာပွနျကာ သူ့ရငျဘတျကိုညာဘကျလကျဖွငျ့တဈကွိမျထကျမနညျးတိုကျခိုကျလာပွနျတယျ။ ဂငျြခနျြ့လကျသီးအရှိနျဟာ ငှကျမှေးကဲ့သို့ပေါ့ပါးကာမွနျဆနျလှပမေယျ့ သကျရောကျမှုကတော့ပွငျး၏။ အစောပိုငျးကဂငျြခနျြကိုပွောထားကွသူတှမှော ဤသညျကိုမွငျပွီးပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈနလေတေယျ။
ကဒီယနျဂငျြခနျြ့ကိုလှညျ့ကွညျ့လိုကျရာတှငျ သူ့အကွညျ့တှထေဲ ဒေါသတှတေရှိနျထိုးပွညျ့နလေသေညျ။ သူ့လိုသနျမာတဲ့သူတျောစငျတဈယောကျက သူ့ထကျမြားစှာအဆငျ့နိမျ့တဲ့ဂငျြခနျြလိုလူဆီက အရိုကျခံရသညျမှာ အတျောကိုခံပွငျးဖို့ကောငျးသညျ။ ဂငျြခနျြက သူမြှျောမှနျးထားသညျထကျ မြားစှာအစှမျးထကျနသေညျလား… သို့ဆိုလြှငျရော ဘာအရေးလဲ… သူကား သူတျောစငျတဈယောကျဖွဈနပွေီလေ။
ကဒီယနျဒေါသအပွညျ့ဖွငျ့ကွုံးဝါးကာ သူ့လကျထဲမှာသူတျောစငျစှမျးအငျတှကေို စုစညျးလိုကျလတေယျ။ ကွီးမားလှတဲ့သူတျောစငျစှမျးအငျအလုံးကွီးဟာ ဂငျြခနျြ့ရငျဘတျကိုဦတညျနလေတေယျ။ ဂငျြခနျြကပေါ့ပါးတဲ့လကျသီးကိုသုံးမယျဆိုရငျ သူကလညျးစှမျးအားအပွညျ့ပါတဲ့ လကျသီးနဲ့ဘာလို့ရငျမဆိုငျရမှာလဲ။
အခွအေနတှေကေတော့ အမွငျ့ဆုံးကိုရောကျလို့လာပွီ။ နှဈယောကျလုံးရဲ့လကျသီးတှထေိပျတိုကျတှရေ့မညျ့အစားဂငျြခနျြက ကဒီယနျ့ရငျဘတျကိုသာဦးတညျလိုကျလတေယျ။ ကဒီယနျ့လကျသီးကလညျးဂငျြခနျြ့အင်ျကြီကိုအပေါကျအကယျြကွီးဖွဈသညျအထိ ပွဲသှားစလေောကျအောငျ ပွငျးထနျသညျ့အသံနှငျ့အတူတိုကျခိုကျမိသှားလတေယျ။ ပွဲသှားသညျ့အင်ျကြီအောကျမှာတော့ မိနျးမပြိုလေးတှစေိတျကူးယဉျလောကျသညျ့ တောငျ့တငျးသညျ့ခန်ဓာဟာပျေါထှကျလာလတေယျ။ သို့သျောငွားလညျး ထိုခန်ဓာလှလှမှာ ကဒီယနျ့၏လကျသီးကွောငျ့ ညိုမဲစှဲသညျ့ဒဏျရာကွီးဖွဈသှားရသညျ။
ကဒီယနျ့တိုကျခိုကျမှုကိုခံလိုကျရတဲ့ဂငျြခနျြမှာ နာကငျြမှုကွောငျ့ရှုံ့တှနလေတေယျ။ သူတျောစငျတဈယောကျရဲ့စှမျးအားကိုတောငျ့ခံဖို့ သူ့ခန်ဓာကမဖွဈနိုငျလဘေူး။ ခကျခကျခဲခဲရှေုာငျတိမျးလိုကျပမေယျ့ အတျောတော့ထိခိုကျမိသှားရသညျ။ သို့ပမေယျ့ ဂငျြခနျြကတော့ပွသနာရှိသညျဟု မထငျပေ။ စငျစဈ ကဒီယနျက သူတျောစငျတဈယောကျမှနျးသူသိပွီးသားပဲလေ။
ဂငျြခနျြကသူတျောစငျအဆငျ့၈ပဲရှိသေးပမေယျ့ သူငယျငယျလေးကတညျးက Azuletဓားသိုငျးကိုကငျြ့ထားခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူ့ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှ အစိတျအပိုငျးတှမှော ပုံမနျြထကျအဆမြားစှာသနျမာနခေဲ့သညျ။ သို့ပမေယျ့ အပွငျပနျးကကွညျ့မညျဆိုလြှငျတော့ သူကအတျောအားနညျးပုံပေါကျလိမျ့မညျ။ ထို့ကွောငျ့ဂငျြခနျြပွငျးပွငျးထနျထနျဒဏျရာရမသှားခဲ့ သို့သျောငွား သူတျောစငျတဈယောကျ၏စှမျးအားတှကေ သူ့ခန်ဓာကိုယျအပွငျပိုငျးကိုတော့ ညိုမဲစှဲသှားစနေိုငျသေးသညျပေ။
အခွားတဈဖကျမှာလညျး ကဒီယနျကနဂိုနရောမှာပဲရပျနဆေဲ။ သို့ရာတှငျ သူ့မကျြနှာမှာတော့ အံ့အားသငျ့နဟေနျပျေါတယျ။ သူနဂိုခံစားနရေတဲ့နာကငျြမှုတှအေပွငျ နောကျထပျအသဈသဈသောနာကငျြမှုတှကေ စတငျထှကျပျေါလာနတေယျ။
ဂငျြခနျြရဲ့ငှကျမှေးကဲ့သို့ပေါ့ပါးသညျ့လကျသီးက သူ့ဗိုကျကိုထိုးမိသှားခဲ့တယျ။ ထိုနရောမှတဆဈဆဈနဲ့အီစိမျ့နအေောငျကို ထူးထူးဆနျးဆနျးကွီးနာကငျြလာနတေယျ။ ထူးဆနျးတဲ့အားလှိုငျးတှကေလညျး သူ့ခန်ဓာအတှငျးမှာ မငွိမျမသကျဖွဈကာလှုပျရှုားနပွေီး မကွာခငျပေါကျကှဲထှကျတော့မယောငျဖွဈနလေပွေနျတယျ။ ဆိုးရှားလှတဲ့နာကငျြမှုတှကွေောငျ့ ကဒီယနျရူးသှားတော့မညျထငျသညျ။
ကဒီယနျ့မကျြနှာမဲမှောငျကာ သူ့စှမျးအားတှကေိုသုံးပွီးကာကှယျထားလိုကျတယျ။ သူဟာ ဂငျြခနျြထကျစှမျးအားမြားပမေယျ့ ဒဏျရာကားရသှားခဲ့ပွီးပွီ။ အရမျးကွီးမပွငျးထနျပမေယျ့ အီစိမျ့နအေောငျနာကငျြနမှေုကွောငျ့ ဆကျလကျတိုကျခိုကျဖို့ရာအတှကျ သူ့အတှကျဖိအားတှဖွေဈနလေပွေီ။
ကဒီယနျ ဂငျြခနျြ့ကိုမယုံကွညျနိုငျစှာကွညျ့နမေိတယျ။ သူထငျထားခဲ့သညျက ပွိုငျဘကျကိုအခုလိုအသာစီးရယူနိုငျဖို့က သူ့လိုသူတျောစငျသာလုပျနိုငျမညျပေါ့။ ဂငျြခနျြ့လိုသူတျောစငျအဆငျ့၈ကိုမဆိုထားနဲ့ အဆငျ့၁၀အထှတျအထိပျကိုတောငျမှ အပွတျအသတျနိုငျခဲ့သေးတဲ့ဟာ… ဒါကသူလကျနကျမသုံးတာနဲ့မဆိုငျဘူး… သူ့ကိုယျပိုငျခှနျအားကိုက ဂငျြခနျြထကျအမြားကွီးသာနခေဲ့ပွီးသား။
ထိုအခြိနျတှငျ ဂငျြခနျြနှငျ့သဘောတူထားခဲ့သညျကို ကဒီယနျသတိရလိုကျသညျ။ သို့သျောငွား ပွနျပွငျဖို့နောကျကသြှားပွီ။ သူသာသူတျောစငျလကျနကျသုံးခဲ့မယျဆိုလြှငျ ဂငျြခနျြကိုအသာလေးနိုငျနိုငျသညျ။ သူကားလြှာရှညျကာ မသုံးဟုကတိပေးခဲ့မိသညျ။ ယခုမှပွနျပွငျကာ လကျနကျထုတျသုံး၍လညျးမရတော့။ သူကတိတညျမှဖွဈမညျ။ မဟုတျလြှငျ သူ့ဂုဏျသိက်ခာကားသုံးရတော့မညျမဟုတျတော့။ ကွညျ့ရှုနသေူတှဟောလညျးအမြားကွီးရှိသညျ။ ဒါ့အပွငျ သူက ကဒီကလနျရဲ့လကျရှေးစငျတဈယောကျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့သူ့ဂုဏျသိက်ခာကပိုအရေးကွီးသညျ။
ကဒီယနျအသငျ့ပွငျမညျပွငျလိုကျခြိနျတှငျ ဂငျြခနျြကလကျနှဈဖကျလုံးအားအပွညျ့ထညျ့ကာတိုကျခိုကျလာနှငျ့ပွီ။ မခနျ့မှနျးနိုငျလောကျအောငျ ပုံသမေဟုတျတဲ့တိုကျကှကျတှဟော ဂငျြခနျြ့ဆီမှလငျြလငျြမွနျမွနျထှကျပျေါလာနသေညျ။ ကဒီယနျ့မကျြလုံးထဲမှာတော့ မီးသီးတှလေငျးလိုကျမှိတျလိုကျဖွဈနသေညျကို မွငျနရေသလိုပငျ။
ကဒီယနျ ဂငျြခနျြ့တိုကျခိုကျမှုတှကေို အနီးကပျတားဆီးနရေသညျ။ သူ့လကျတဈဖကျကကြိုးနတောမို့ အခွားတဈဖကျတညျးကိုသာ သုံးနိုငျလသေညျ။ သူ့ရဲ့သူတျောစငျစှမျးအားတှကွေောငျ့သာ တားဆီးနိုငျနခွေငျးကို သူလညျးသိသညျ။ အခုအခြိနျတှငျ သူဂငျြခနျြ့ကို အထငျမသေးရဲတော့ဘဲ သူနှငျ့တနျးတူစှမျးအားမွငျ့သညျ့ပွိုငျဘကျဟုသာမွငျနလေသေညျ။
တိုကျခိုကျနကွေသညျ့လူနှဈယောကျမှာ တဖွေးဖွေးမွနျဆနျလာနတေယျ။ တိုကျပှဲဟာ ပွငျးထနျသထကျပွငျးထနျလာတယျ။ နှဈယောကျလုံးဟာ သကှေငျးသကှေကျကိုခညျြး တိုကျခိုကျခံနရေတာမို့ အသညျးအသနျကိုသတိထားကာရှောငျတိမျးနရေသညျ။
ဂငျြခနျြက ပိုသနျမာလာပွီးတော့ ကဒီယနျကတော့ ခုခံဖို့ခကျသထကျခကျလာနတေယျ။ သူ့အနနေဲ့ ဂငျြခနျြရဲ့ လကျသီးတှကေိုတဖကျြဖကျြနဲ့သာ မွငျနရေပွီမို့ သူ့အကွားအာရုံကိုသာ အားထားပွီးရှောငျရှားနရေလတေယျ။
နောကျဆုံးမှာတော့ ကဒီယနျသတိတဈခကျြလှတျသှားရာ သူ့ပခုံးကိုဂငျြခနျြ၏အားပါသညျ့ရိုကျခကျြထိသှားသညျ။ ကဒီယနျ့လှုပျရှုားမှုတှခေဏတာ နှေးကှေးသှားခြိနျတှငျ ဂငျြခနျြကတုံ့ဆိုငျးမနဘေဲ သူ့လကျကနျြအားအငျတှစေုစညျးကာ ကဒီယနျ့ရငျဘတျကို အသားကုနျရိုကျခလြိုကျသညျ။ နောကျအဆကျမပွတျဆိုသလို တဘုနျးဘုနျးဖွငျ့ ကဒီယနျ့ကိုရှောငျရှားခြိနျမရအောငျ နရောပေါငျးစုံမှရိုကျနှကျလတေော့တယျ။
အတျောဒဏျရာရထားသညျ့ကဒီယနျ့ပခုံးကိုလညျး ထပျခါထပျခါရိုကျနှကျသညျ။ ဆကျတိုကျဖွဈတဲ့ရိုကျနှကျမှုတှကေို ကဒီယနျ့သူတျောစငျစှမျးအားတှနှေငျ့တောငျ မရှောငျရှားနိုငျတော့။ ကဒီယနျ သှေးတဈပှကျအနျထုတျလိုကျရပပွေီ။
ကဒီယနျကစငျထောငျ့နားရောကျနသေညျကို သတိထားမိသောဂငျြခနျြ့မကျြနှာတှငျ လူယုတျမာအပွုံးပျေါလာခဲ့သညျ။ သူအခြိနျဆှဲမနဘေဲ အတျောဆိုးဆိုးရှားရှားကိုညိုမဲစှဲကာရောငျကိုငျးနပွေီဖွဈတဲ့ ကဒီယနျ့ပခုံးကို နောကျတဈကွိမျအားပါပါဖွငျ့ ရိုကျလိုကျသညျ။ ယခုလကျသီးသညျ ယခငျ့တှထေကျမြားစှာပွငျးလရော ကဒီယနျစငျအောကျသို့ ပုံပကျြပနျးပကျြပွုတျကသြှားတော့သညျ။
ဂငျြခနျြကတော့ ပွိုငျပှဲစငျမွငျ့ပျေါမတျမတျရပျနကော အသကျကိုပွငျးပွငျးရှူနလေသေညျ။ သူအတျောကိုပငျပနျးသှားရပွီ။ သူ့မှာအားအငျတှနေညျးနညျးလေးတောငျမကနျြတော့ဘူး။ ကဒီယနျသာသတိမလှတျသှားဘူးဆိုလြှငျ စငျအောကျမှာလဲနေ၇မညျ့သူက သူဖွဈလိမျ့မညျ။
ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျကွီးတဈခုလု့း အပျကသြံပငျမကွားရအောငျကို တိတျဆိတျနသေညျ။ လူအားလုံးမှာ အံ့သွတုနျလှုပျဟနျတှနှေငျ့သာရှိနသေညျ။ သူတျောစငျအဆငျ့၈မှာရှိတဲ့သူက ဘယျလိုဖွဈပွီးသူတျောစငျတဈယောကျကိုနိုငျသှားရတာလဲ။ ဒါဘယျလိုမှမဖွဈနိုငျတာကွီး… ဒီလိုဖွဈမယျလို့ဘယျသူကတှေးမိခဲ့မှာလဲ…
အသံတဈခုကဖောကျထှကျလာသညျနှငျ့ ကြှတျကြှတျညံစလေောကျအောငျ ကယျြလောငျသညျ့ငွငျးခုနျသံတှဟော နောကျမှလိုကျပါလာသညျ။ ကဒီမောငျနှမနှဈယောကျဟာ လဲကနြသေညျ့ကဒီယနျဆီအပွေးသှားကာ ထှေးပှထေ့ားလိုကျကွသညျ။
ပရိတျသတျတှထေံမှလညျး မြိုးစုံသောထငျမွငျခကျြတှနှေငျ့ ဆူညံနလေတေယျ။
“ဘုရားရေ။ ငါအိပျမကျမကျနတောမဟုတျဘူးလား… အဆငျ့၈ကလူက ဘယျလိုလုပျသူတျောစငျကိုနိုငျသှားတာလဲ။ အဆငျ့၁၀အထှတျအထိပျသမားတောငျ မနိုငျခဲ့ဘူးလေ”
“ခငျြးယနျရှငျးတနျက အဆငျ့၈ရောဟုတျရဲ့လားကှာ။ “
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျရဲ့ခှနျအားတှကေ သူတျောစငျအဆငျ့၈လို့ပွောဖို့ခကျတယျ။ ကဒီယနျကသူတျောစငျလကျနကျမသုံးခဲ့ပမေယျ့ ခငျြးယနျရှငျးတနျထကျ အမြားကွီးသာတာပဲလေ။”
“ကွညျ့ရတာ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျက မသမာတဲ့နညျးလမျးတှမြေား သုံးလိုကျသလားပဲ”
အမြိုးမြိုးသော မှတျခကျြတှကေို ဂငျြခနျြမညျသို့မှမတုံ့ပွနျဘဲ စငျအောကျသို့ဆငျးကာ ခငျြးယနျဟူဆီသှားလိုကျသညျ။
ခငျြးယနျဟူ၏ အလှနျအမငျးအံ့အားသငျ့နတေဲ့အကွညျ့ကိုမွငျတော့ ဂငျြခနျြပွုံးလိုကျသညျ။
“အကိုကွီး ဒီညီငယျလေးက စိတျမပကျြစဘေူးမဟုတျလား။ ကြှနျတျောနိုငျတယျ”
“ညီလေးက တကယျ့ကိုအံ့အားသငျ့စရာကောငျးတယျကှာ။ သူတျောစငျတဈယောကျကို ရိုကျနှကျနိုငျခဲ့တယျ။ မငျးအကိုကွီးက မငျးကိုတအားလေးစားသှားပွီ”
ဂငျြခနျြလညျး ခငျြးယနျဟူကိုပွနျဖကျလိုကျရငျး သူကနြေပျစှာပွုံးလိုကျနိုငျပွီဖွဈသညျ။
“အကိုကွီး ဒီမှာစကားပွောလို့မကောငျးဘူး။ ဒီကအရငျသှားရအောငျ”
နာကျင်မှုကိုအံကြိတ်ခံရင်း ဂျင်ချန်ကိုခြေထောက်ဖြင့်လှမ်းကန်လိုက်ကာ သူ့ကျန်လက်တစ်ဖက်ကိုရုန်းထွက်လိုက်သည်။ သူ့လက်တစ်ဖက်ကကျိုးသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျန်တစ်ဖက်ကတော့ အခြေအနေမဆိုးလှသေး….
သူကား လက်တစ်ဖက်ကျိုးနေတာတောင်မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်သေးသည်။ အခုအခြေအနေကဆိုးရွားနေပေမယ့် ကံကောင်းတာက ကဒီယန်မှာအတွေ့အကြုံတွေများသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေကို မည်သို့ထိန်းချုပ်သင့်သည်ကို သူသိသည်။
အရှိန်ပြင်းသည့်ခြေကန်ချက်နှင့် လှုပ်ရှုားလာသည့်လက်ကို ဂျင်ချန့်မျက်လုံးထဲမြင်လိုက်သည်မို့ သူတိုက်ရိုက်ပြန်မတိုက်နိုင်သည်ကိုသိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် မတတ်သာစွာဖြင့် ကဒီယန့်လက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီး Profound ခြေလှမ်းကိုသုံးကာ ရှေုာင်ထွက်လိုက်သည်။ ကဒီယန့်ကန်ချက်တွေမှလွတ်ရန် ကိုယ်ကိုတစ်ပတ်လည်ကာ ဆုတ်ရင်းရှေုာင်တိမ်းသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ သူ့သူတော်စင်စွမ်းအားတွေကိုစုကာ ကဒီယန့်ကျောကိုရိုက်ချရန်ချိန်ထားလိုက်သည်။
ဂျင်ချန်ဘေးကိုရှေုာင်ထွက်သွားတာနဲ့ ကဒီယန့်သတိထားနေနေရကား သူ့ကျောမှစွမ်းအားကိုခံစားမိသည်နှင့် အနည်းငယ်တောင်တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ ချက်ချင်းရှေုာင်တိမ်းလိုက်သည်။ သူရှေုာင်လိုက်ပေမယ့် ထိတ်လန့်စိတ်ကရှိနေဆဲ။ သူ့ကျောမှဖိအားကအလွတ်ပေးခြင်းမရှိ၇ာ ကဒီယန့်စိုးရိမ်သွားရသည်။
ကဒီယန့်အတွက် ဂျင်ချန့်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်အပြည့်စွမ်းအားတွေကိုရှေုာင်ဖို့ရာ မလျင်လိုက်နိုင်လေဘူး။ ထို့ကြောင့် သူ့ကျောကိုရိုက်ချမိရာက အသံအကျယ်ကြီးထွက်လာလေတယ်။ ဤသည်က ကဒီယန့်ကိုရှေု့သို့နှစ်လှမ်းလောက် အရှိန်ဖြင့်ရောက်သွားစေတယ်။ သူကား သန်မာသည့်သူတော်စင်ဖြစ်ရကား ချက်ချင်းသူ့ကိုယ်သူစစ်ဆေးလိုက်တယ်။ သူ့မျက်နှာကဖြူဖျော့နေခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ဂျင်ချန်ကနဂိုကထိခိုက်ထားသည့်နေရာကိုသာ ထပ်ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အပြင် ဂျင်ချန့်စွမ်းအားက သူတော်စင်အဆင့်ကိုးအထွတ်အထိပ်အနေအထားမှာလည်းရှိနေသေးတယ်။ သူကသူတော်စင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့် စွမ်းအားလည်းပိုမြင့်ပေမယ့် သူကား ဒဏ်ရာရထားပြီးသားဖြစ်တော့ သူပြင်းပြင်းထန်ထန်ထပ်မံထိခိုက်သွားရပြန်တယ်။ ကဒီယန့်သူ့ကိုယ်တွင်းချီတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်လည်ကာ ကုသလိုက်သည်။ သူ့ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကလီစာတွေမှာ သေလုအောင်နာကျင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကဒီယန်သူ့ကိုယ်သူစစိဆေးနေဆဲမှာ ဂျင်ချန်ဟာသူ့ဘေးကိုရောက်လာပြန်ကာ သူ့ရင်ဘတ်ကိုညာဘက်လက်ဖြင့်တစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်လာပြန်တယ်။ ဂျင်ချန့်လက်သီးအရှိန်ဟာ ငှက်မွှေးကဲ့သို့ပေါ့ပါးကာမြန်ဆန်လှပေမယ့် သက်ရောက်မှုကတော့ပြင်း၏။ အစောပိုင်းကဂျင်ချန်ကိုပြောထားကြသူတွေမှာ ဤသည်ကိုမြင်ပြီးပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်နေလေတယ်။
ကဒီယန်ဂျင်ချန့်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာတွင် သူ့အကြည့်တွေထဲ ဒေါသတွေတရှိန်ထိုးပြည့်နေလေသည်။ သူ့လိုသန်မာတဲ့သူတော်စင်တစ်ယောက်က သူ့ထက်များစွာအဆင့်နိမ့်တဲ့ဂျင်ချန်လိုလူဆီက အရိုက်ခံရသည်မှာ အတော်ကိုခံပြင်းဖို့ကောင်းသည်။ ဂျင်ချန်က သူမျှော်မှန်းထားသည်ထက် များစွာအစွမ်းထက်နေသည်လား… သို့ဆိုလျှင်ရော ဘာအရေးလဲ… သူကား သူတော်စင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလေ။
ကဒီယန်ဒေါသအပြည့်ဖြင့်ကြုံးဝါးကာ သူ့လက်ထဲမှာသူတော်စင်စွမ်းအင်တွေကို စုစည်းလိုက်လေတယ်။ ကြီးမားလှတဲ့သူတော်စင်စွမ်းအင်အလုံးကြီးဟာ ဂျင်ချန့်ရင်ဘတ်ကိုဦတည်နေလေတယ်။ ဂျင်ချန်ကပေါ့ပါးတဲ့လက်သီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် သူကလည်းစွမ်းအားအပြည့်ပါတဲ့ လက်သီးနဲ့ဘာလို့ရင်မဆိုင်ရမှာလဲ။
အခြေအနေတွေကတော့ အမြင့်ဆုံးကိုရောက်လို့လာပြီ။ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့လက်သီးတွေထိပ်တိုက်တွေ့ရမည့်အစားဂျင်ချန်က ကဒီယန့်ရင်ဘတ်ကိုသာဦးတည်လိုက်လေတယ်။ ကဒီယန့်လက်သီးကလည်းဂျင်ချန့်အင်္ကျီကိုအပေါက်အကျယ်ကြီးဖြစ်သည်အထိ ပြဲသွားစေလောက်အောင် ပြင်းထန်သည့်အသံနှင့်အတူတိုက်ခိုက်မိသွားလေတယ်။ ပြဲသွားသည့်အင်္ကျီအောက်မှာတော့ မိန်းမပျိုလေးတွေစိတ်ကူးယဉ်လောက်သည့် တောင့်တင်းသည့်ခန္ဓာဟာပေါ်ထွက်လာလေတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ထိုခန္ဓာလှလှမှာ ကဒီယန့်၏လက်သီးကြောင့် ညိုမဲစွဲသည့်ဒဏ်ရာကြီးဖြစ်သွားရသည်။
ကဒီယန့်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတဲ့ဂျင်ချန်မှာ နာကျင်မှုကြောင့်ရှုံ့တွနေလေတယ်။ သူတော်စင်တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းအားကိုတောင့်ခံဖို့ သူ့ခန္ဓာကမဖြစ်နိုင်လေဘူး။ ခက်ခက်ခဲခဲရှေုာင်တိမ်းလိုက်ပေမယ့် အတော်တော့ထိခိုက်မိသွားရသည်။ သို့ပေမယ့် ဂျင်ချန်ကတော့ပြသနာရှိသည်ဟု မထင်ပေ။ စင်စစ် ကဒီယန်က သူတော်စင်တစ်ယောက်မှန်းသူသိပြီးသားပဲလေ။
ဂျင်ချန်ကသူတော်စင်အဆင့်၈ပဲရှိသေးပေမယ့် သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက Azuletဓားသိုင်းကိုကျင့်ထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ပုံမျန်ထက်အဆများစွာသန်မာနေခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် အပြင်ပန်းကကြည့်မည်ဆိုလျှင်တော့ သူကအတော်အားနည်းပုံပေါက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဂျင်ချန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရမသွားခဲ့ သို့သော်ငြား သူတော်စင်တစ်ယောက်၏စွမ်းအားတွေက သူ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပိုင်းကိုတော့ ညိုမဲစွဲသွားစေနိုင်သေးသည်ပေ။
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကဒီယန်ကနဂိုနေရာမှာပဲရပ်နေဆဲ။ သို့ရာတွင် သူ့မျက်နှာမှာတော့ အံ့အားသင့်နေဟန်ပေါ်တယ်။ သူနဂိုခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုတွေအပြင် နောက်ထပ်အသစ်သစ်သောနာကျင်မှုတွေက စတင်ထွက်ပေါ်လာနေတယ်။
ဂျင်ချန်ရဲ့ငှက်မွှေးကဲ့သို့ပေါ့ပါးသည့်လက်သီးက သူ့ဗိုက်ကိုထိုးမိသွားခဲ့တယ်။ ထိုနေရာမှတဆစ်ဆစ်နဲ့အီစိမ့်နေအောင်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးနာကျင်လာနေတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့အားလှိုင်းတွေကလည်း သူ့ခန္ဓာအတွင်းမှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်ကာလှုပ်ရှုားနေပြီး မကြာခင်ပေါက်ကွဲထွက်တော့မယောင်ဖြစ်နေလေပြန်တယ်။ ဆိုးရွားလှတဲ့နာကျင်မှုတွေကြောင့် ကဒီယန်ရူးသွားတော့မည်ထင်သည်။
ကဒီယန့်မျက်နှာမဲမှောင်ကာ သူ့စွမ်းအားတွေကိုသုံးပြီးကာကွယ်ထားလိုက်တယ်။ သူဟာ ဂျင်ချန်ထက်စွမ်းအားများပေမယ့် ဒဏ်ရာကားရသွားခဲ့ပြီးပြီ။ အရမ်းကြီးမပြင်းထန်ပေမယ့် အီစိမ့်နေအောင်နာကျင်နေမှုကြောင့် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအတွက် သူ့အတွက်ဖိအားတွေဖြစ်နေလေပြီ။
ကဒီယန် ဂျင်ချန့်ကိုမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်နေမိတယ်။ သူထင်ထားခဲ့သည်က ပြိုင်ဘက်ကိုအခုလိုအသာစီးရယူနိုင်ဖို့က သူ့လိုသူတော်စင်သာလုပ်နိုင်မည်ပေါ့။ ဂျင်ချန့်လိုသူတော်စင်အဆင့်၈ကိုမဆိုထားနဲ့ အဆင့်၁၀အထွတ်အထိပ်ကိုတောင်မှ အပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့သေးတဲ့ဟာ… ဒါကသူလက်နက်မသုံးတာနဲ့မဆိုင်ဘူး… သူ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားကိုက ဂျင်ချန်ထက်အများကြီးသာနေခဲ့ပြီးသား။
ထိုအချိန်တွင် ဂျင်ချန်နှင့်သဘောတူထားခဲ့သည်ကို ကဒီယန်သတိရလိုက်သည်။ သို့သော်ငြား ပြန်ပြင်ဖို့နောက်ကျသွားပြီ။ သူသာသူတော်စင်လက်နက်သုံးခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ဂျင်ချန်ကိုအသာလေးနိုင်နိုင်သည်။ သူကားလျှာရှည်ကာ မသုံးဟုကတိပေးခဲ့မိသည်။ ယခုမှပြန်ပြင်ကာ လက်နက်ထုတ်သုံး၍လည်းမရတော့။ သူကတိတည်မှဖြစ်မည်။ မဟုတ်လျှင် သူ့ဂုဏ်သိက္ခာကားသုံးရတော့မည်မဟုတ်တော့။ ကြည့်ရှုနေသူတွေဟာလည်းအများကြီးရှိသည်။ ဒါ့အပြင် သူက ကဒီကလန်ရဲ့လက်ရွေးစင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ဂုဏ်သိက္ခာကပိုအရေးကြီးသည်။
ကဒီယန်အသင့်ပြင်မည်ပြင်လိုက်ချိန်တွင် ဂျင်ချန်ကလက်နှစ်ဖက်လုံးအားအပြည့်ထည့်ကာတိုက်ခိုက်လာနှင့်ပြီ။ မခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင် ပုံသေမဟုတ်တဲ့တိုက်ကွက်တွေဟာ ဂျင်ချန့်ဆီမှလျင်လျင်မြန်မြန်ထွက်ပေါ်လာနေသည်။ ကဒီယန့်မျက်လုံးထဲမှာတော့ မီးသီးတွေလင်းလိုက်မှိတ်လိုက်ဖြစ်နေသည်ကို မြင်နေရသလိုပင်။
ကဒီယန် ဂျင်ချန့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အနီးကပ်တားဆီးနေရသည်။ သူ့လက်တစ်ဖက်ကကျိုးနေတာမို့ အခြားတစ်ဖက်တည်းကိုသာ သုံးနိုင်လေသည်။ သူ့ရဲ့သူတော်စင်စွမ်းအားတွေကြောင့်သာ တားဆီးနိုင်နေခြင်းကို သူလည်းသိသည်။ အခုအချိန်တွင် သူဂျင်ချန့်ကို အထင်မသေးရဲတော့ဘဲ သူနှင့်တန်းတူစွမ်းအားမြင့်သည့်ပြိုင်ဘက်ဟုသာမြင်နေလေသည်။
တိုက်ခိုက်နေကြသည့်လူနှစ်ယောက်မှာ တဖြေးဖြေးမြန်ဆန်လာနေတယ်။ တိုက်ပွဲဟာ ပြင်းထန်သထက်ပြင်းထန်လာတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးဟာ သေကွင်းသေကွက်ကိုချည်း တိုက်ခိုက်ခံနေရတာမို့ အသည်းအသန်ကိုသတိထားကာရှောင်တိမ်းနေရသည်။
ဂျင်ချန်က ပိုသန်မာလာပြီးတော့ ကဒီယန်ကတော့ ခုခံဖို့ခက်သထက်ခက်လာနေတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဂျင်ချန်ရဲ့ လက်သီးတွေကိုတဖျက်ဖျက်နဲ့သာ မြင်နေရပြီမို့ သူ့အကြားအာရုံကိုသာ အားထားပြီးရှောင်ရှားနေရလေတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကဒီယန်သတိတစ်ချက်လွတ်သွားရာ သူ့ပခုံးကိုဂျင်ချန်၏အားပါသည့်ရိုက်ချက်ထိသွားသည်။ ကဒီယန့်လှုပ်ရှုားမှုတွေခဏတာ နှေးကွေးသွားချိန်တွင် ဂျင်ချန်ကတုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ သူ့လက်ကျန်အားအင်တွေစုစည်းကာ ကဒီယန့်ရင်ဘတ်ကို အသားကုန်ရိုက်ချလိုက်သည်။ နောက်အဆက်မပြတ်ဆိုသလို တဘုန်းဘုန်းဖြင့် ကဒီယန့်ကိုရှောင်ရှားချိန်မရအောင် နေရာပေါင်းစုံမှရိုက်နှက်လေတော့တယ်။
အတော်ဒဏ်ရာရထားသည့်ကဒီယန့်ပခုံးကိုလည်း ထပ်ခါထပ်ခါရိုက်နှက်သည်။ ဆက်တိုက်ဖြစ်တဲ့ရိုက်နှက်မှုတွေကို ကဒီယန့်သူတော်စင်စွမ်းအားတွေနှင့်တောင် မရှောင်ရှားနိုင်တော့။ ကဒီယန် သွေးတစ်ပွက်အန်ထုတ်လိုက်ရပေပြီ။
ကဒီယန်ကစင်ထောင့်နားရောက်နေသည်ကို သတိထားမိသောဂျင်ချန့်မျက်နှာတွင် လူယုတ်မာအပြုံးပေါ်လာခဲ့သည်။ သူအချိန်ဆွဲမနေဘဲ အတော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကိုညိုမဲစွဲကာရောင်ကိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကဒီယန့်ပခုံးကို နောက်တစ်ကြိမ်အားပါပါဖြင့် ရိုက်လိုက်သည်။ ယခုလက်သီးသည် ယခင့်တွေထက်များစွာပြင်းလေရာ ကဒီယန်စင်အောက်သို့ ပုံပျက်ပန်းပျက်ပြုတ်ကျသွားတော့သည်။
ဂျင်ချန်ကတော့ ပြိုင်ပွဲစင်မြင့်ပေါ်မတ်မတ်ရပ်နေကာ အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေလေသည်။ သူအတော်ကိုပင်ပန်းသွားရပြီ။ သူ့မှာအားအင်တွေနည်းနည်းလေးတောင်မကျန်တော့ဘူး။ ကဒီယန်သာသတိမလွတ်သွားဘူးဆိုလျှင် စင်အောက်မှာလဲနေ၇မည့်သူက သူဖြစ်လိမ့်မည်။
ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုလု့း အပ်ကျသံပင်မကြားရအောင်ကို တိတ်ဆိတ်နေသည်။ လူအားလုံးမှာ အံ့သြတုန်လှုပ်ဟန်တွေနှင့်သာရှိနေသည်။ သူတော်စင်အဆင့်၈မှာရှိတဲ့သူက ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးသူတော်စင်တစ်ယောက်ကိုနိုင်သွားရတာလဲ။ ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာကြီး… ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူကတွေးမိခဲ့မှာလဲ…
အသံတစ်ခုကဖောက်ထွက်လာသည်နှင့် ကျွတ်ကျွတ်ညံစေလောက်အောင် ကျယ်လောင်သည့်ငြင်းခုန်သံတွေဟာ နောက်မှလိုက်ပါလာသည်။ ကဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ လဲကျနေသည့်ကဒီယန်ဆီအပြေးသွားကာ ထွေးပွေ့ထားလိုက်ကြသည်။
ပရိတ်သတ်တွေထံမှလည်း မျိုးစုံသောထင်မြင်ချက်တွေနှင့် ဆူညံနေလေတယ်။
“ဘုရားရေ။ ငါအိပ်မက်မက်နေတာမဟုတ်ဘူးလား… အဆင့်၈ကလူက ဘယ်လိုလုပ်သူတော်စင်ကိုနိုင်သွားတာလဲ။ အဆင့်၁၀အထွတ်အထိပ်သမားတောင် မနိုင်ခဲ့ဘူးလေ”
“ချင်းယန်ရှင်းတန်က အဆင့်၈ရောဟုတ်ရဲ့လားကွာ။ “
“ချင်းယန် ရှင်းတန်ရဲ့ခွန်အားတွေက သူတော်စင်အဆင့်၈လို့ပြောဖို့ခက်တယ်။ ကဒီယန်ကသူတော်စင်လက်နက်မသုံးခဲ့ပေမယ့် ချင်းယန်ရှင်းတန်ထက် အများကြီးသာတာပဲလေ။”
“ကြည့်ရတာ ချင်းယန် ရှင်းတန်က မသမာတဲ့နည်းလမ်းတွေများ သုံးလိုက်သလားပဲ”
အမျိုးမျိုးသော မှတ်ချက်တွေကို ဂျင်ချန်မည်သို့မှမတုံ့ပြန်ဘဲ စင်အောက်သို့ဆင်းကာ ချင်းယန်ဟူဆီသွားလိုက်သည်။
ချင်းယန်ဟူ၏ အလွန်အမင်းအံ့အားသင့်နေတဲ့အကြည့်ကိုမြင်တော့ ဂျင်ချန်ပြုံးလိုက်သည်။
“အကိုကြီး ဒီညီငယ်လေးက စိတ်မပျက်စေဘူးမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်နိုင်တယ်”
“ညီလေးက တကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းတယ်ကွာ။ သူတော်စင်တစ်ယောက်ကို ရိုက်နှက်နိုင်ခဲ့တယ်။ မင်းအကိုကြီးက မင်းကိုတအားလေးစားသွားပြီ”
ဂျင်ချန်လည်း ချင်းယန်ဟူကိုပြန်ဖက်လိုက်ရင်း သူကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
“အကိုကြီး ဒီမှာစကားပြောလို့မကောင်းဘူး။ ဒီကအရင်သွားရအောင်”
Back to Book Previous
Pann Khatt Waii 13.12.2019, 12:16 5
2020 © BookCubicle. All rights reserved